Izobuyela kuHulumeni wokubambisana i-India? - Bayede News
Izobuyela kuHulumeni wokubambisana i-India?
NGONHLABA i-India izoba nokhetho lukazwelonke. NgoMthethosisekelo waleli lizwe uNdunankulu ukhethwa amalungu ePhalamende. Abantu uma bevota bavotela amaqembu, bese kuthathwa isibalo sabantu abavotile sihlukaniswe ngokwenani labantu abavotele leyo nhlangano ukuze kutholakale ukuthi zingaki izihlalo zasePhalamende okumele zitholwe yilelo qembu.
Ngaphambi kowezi-2014, yayisingama-30 iminyaka kubuswa ngokubambisana phakathi kwamaqembu njengoba lalivele lingabi bikho elithola izihlalo ezingaphezu kwamaphesenti angama-51 ukuze liqoke uNdunankulu ngaphandle kokuphikiswa. Lokhu kwaqala ukwenzeka ngokhetho lukazwelonke lwangowe-1989 lapho iLok Dal, i-Indian National Congress kanye neJan Morcha babopha amaxhama okusebenzisana bazibiza ngeJanata Dal ngaphansi bokuholi bukaVishwanath Pratap Singh. Ngowe-1990, zisengama-343 kuphela izinsuku kwakhiwa amaxhama okusebenzisana, i-Lok Dal neJan Morcha batshela uSomlomo wePhalamende ukuthi sebethathe isinqumo sokuhoxisa ukweseka kwabo ubuholi bunaNdunankulu uSingh. Lokhu kwabe sekuphoqa ukuthi kuphinde kuqale phansi uhlelo lokukhetha uNdunankulu. Kwabe sekuvuka enye inhlangano yokubambisana iSamajwadi Janata Party eyaqoka uChandra Shekhar njengoNdunankulu. Lokhu kusebenzisana kwaphela ngowezi-1991 zisengama-223 kuphela izinsuku. Okufanayo kwaphinde kwenzeka ngowe-1997 ngesikhathi uDeve Gowda ehluleka ukuhlala unyaka njengoNdunankulu. Ekuphumeni kwakhe kwabe sekungena u-Inder Kumar Gujral naye owaphatha isikhathi esingangonyaka kuphela.
Ngowezi-2014 konke lokhu kwaguquka njengoba okokuqala eminyakeni engama-30 inhlangano eyodwa yakwazi ukuthola izihlalo zasePhalamende ezingaphezu kwamaphesenti anagama-51. IBharatiya Janata Party (BJP) eholwa uNdunankulu uNarendra Modi yawaqwaqwada amakhanda onke amaqembu yathola izihlalo ezingama-268 okwenza amaphesenti angama-51.34.
UNdunankulu Modi wayengaconsi phansi ngalesi sikhathi engena kulesi sikhundla kangangokuthi ngesikhathi evakashele e-England, kwagcwala inkundla yezemidlalo abantu abangokuzalwa e-India abahlala kulelizwe bezothamela inkulumo yakhe yokubonga abamvotelile. I-England ingelinye lamazwe ahamba phambili ngokuba nabantu abangokudabuka e-India.
Ukuthandwa kukaModi kanye nenhlangano yakhe iBJP e-India sekwehle kakhulu kunakuqala uma kuzobalwa ngokokhetho lwezifundazwe ezinhlanu lwanyakenye. Kulezi zifundazwe iBJP ayilibonanga elidlalayo njengoba ingakaze ithole nesisodwa isihlalo kulezi zifundazwe.
Ukuntuleka kwamathuba omsebenzi kungezinye zezinto ezimfakela iphunga lomzondo uModi. Nyakenye kwaba nendaba eyaveza obala ukuthi antuleka kangakanani amathuba omsebenzi e-India ngesikhathi inkampani yezitimela iveza ukuthi idinga abantu abayizinkulungwane eziyikhulu, abantu abafaka isicelo somsebenzi baba ngaphezu kwezigidi ezingama-20. Ukuputshuka kwalolu lwazi kwaqubula iziteleka okwabe namaqembu aphikisayo asethole isikhwili sokugadla kuHulumeni kaNdunankulu uModi.
Ngowezi-2016 uNdunankulu wamemezela ukuthi uHulumeni unohlelo olusha lokuqeda ukukhwabaniswa kwemali kanye nokwakhiwa kwemali engumgunyathi.
I-India ingelinye lamazwe anenkinga yokusetshenziswa kwemali, okuyinto ewukhinyabeza kakhulu umnotho wezwe. Ngaphansi kwalolu hlelo, uHulumeni wakhuthaza abantu ukuthi babuyise yonke imali engamaphepha khona bezoshintshelwa ngentsha. Abantu bayibuyisa imali kodwa uma sekufanele bathole abathenjiswe yona wahluleka uHulumeni, kwatholakala ukuthi sekukhona asebesebenzise leli thuba njengelokuzicebisa. Abantu bagcina sebezithola bengasenamali ekubeni babeyihambise ngemigqomo imali. Kwamphoqa ukuthi aze axolise uNdunankulu uModi ngoba uhlelo lwakhe lwangungasakwazi ukuqhubeka kanti inqwaba yabantu yalahlekelwa izimali. Lokhu kwaba izindaba ezinhle kumaqembu aphikisayo.
UNdunankulu uModi besekunesikhathi esolwa ngokungawafuni amaSulumane. Abaningi babengenandaba nalokhu kwazise bamvotela ngobuningi babo ngowezi-2014, kodwa kuthe ngowezi-2017 inhlangano yakhe iBJP yamemezela ukuthi uHulumeni wayo uzophasisa umthetho ophuca amalungelo bonke labo abasuka ePakistan naseSri Lanka asebazitholela ikhaya e-India. Lo mthetho wawuthi bonke abafika emva kowe-1970 abasuka kulawa mazwe bayakhuthazwa ukuthi baphindele emuva ngoba ababona abokudabuka e-India. Amazwe omhlaba kanjalo ne- United Nations (UN) bakhwela badilika kuHulumeni wase-India. Kwalandela uhide lwemibhikisho ngenxa yalo mthetho. UHulumeni waze waphoqeleka ukuthi awubuyekeze lo mthetho nakuba ebonakala ehudula izinyawo.
I-BJP iseyintandokazi e-India kwazise ezinye izinhlangano ezinjengo-Indian National Congress (INC), ne-All India Anna Dravida Mennetra Kazhagam (AIADMK) abhecana wodwa kubangwa ubuholi kusolwana nangenkohlakalo. Izinkomba zakamuva kodwa ziveza ukuthi ingase ingawatholi amaphesenti angaphezu kwama-50 le nhlangano, okuzochaza ukuthi kubuyelwa ohlelweni lwakudala loHulumeni bokubambisana.